मानिस: शरीर को संरचना मा systematics र salient सुविधाहरू
एक विशेष स्थान मानिस जैविक संसारको प्रणालीमा ओगटेको छ। यो को systematics प्रजाति यसको आफ्नै विशेषताहरु छन्। तिनीहरूले होमो Sapiens को जैव-सामाजिक आधार सम्बन्धित छन्।
एक हात मा, मानिस वन्यजन्तु विषयको, पशु को राज्य को एक प्रतिनिधि हो। अन्य मा - यो समाज को व्यवस्था अनुसार बसोबास गर्ने एक सामाजिक व्यक्ति छ र कडाई तिनीहरूलाई obeys। तसर्थ, मानव taxonomy को आधुनिक विज्ञान र जैविक र सामाजिक स्थिति रूपमा यसको मूल को peculiarities।
Systematics व्यक्ति: तालिका
जो आधुनिक मानिस हौं दर को प्रतिनिधिहरु, समान संरचनात्मक सुविधाहरू एक नम्बर छ। यो एक साधारण पुर्खा को अस्तित्व र विकास को सामान्य बाटो प्रमाण छ।
taxonomic एकाइ समानता र विशेषता सुविधाहरू
Chordates प्रकार तन्त्रिका ट्यूब र notochord को प्रारम्भिक चरणमा भ्रूण विकास गठन
आन्तरिक को गठन कंकाल, जग जो को ढाड छ
वर्ग स्तनधारी calves दूध, डायफ्राम को उपस्थिति, भिन्नता दाँत, पल्मोनरी श्वसन, न्यानो-blooded, पूर्व-Natal विकास खुवाउने
प्राइमेट्स समूह पाँच-fingered limbs, को औंठी आराम को विरोध, chimpanzees को जीन को 90% को पहिचान
hominid परिवार मस्तिष्क विकास, सोझो हिंड्न क्षमता
रड मानिस को arched खुट्टा को उपस्थिति, निःशुल्क र माथिल्लो limb राम्ररी विकास, को मेरुदण्ड को घटता को उपस्थिति, स्पस्ट बोल्नु् बोली
होमो हेर्नुहोस् Sapiens बनी बुद्धि र अमूर्त सोच
तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ रूप मा, taxonomy मानिसलाई ठाउँ स्पष्ट परिभाषित गरिएको छ। खाना को Heterotrophic प्रकार, सीमित वृद्धि, सक्रिय आफ्नो जनावर राज्य स्वामित्वको को आन्दोलन परिभाषित गर्ने क्षमता। तर को विशेष मा मानिसको भ्रूण विकास एक प्रतिनिधि हो Chordates को प्रकार। यो एकाइ पनि क्रमबद्घ कक्षाहरू bony र cartilaginous माछा, सरीसृप, amphibians र चरा समावेश छ।
यस्ता विभिन्न जीव नै प्रकार को हुन सक्छ? आफ्नो भ्रूण विकास सबै कुरा। प्रारम्भिक चरणमा तिनीहरूले axial कर्ड राखे - कर्ड। माथि यो तन्त्रिका ट्यूब गठन। र कर्ड अन्तर्गत - intestines एक ट्यूब मार्फत। यो घाँटी प्रेमी slits छन्। मानिसहरूलाई यी rudimentary संरचना विकास संग Metamorphoses एक श्रृंखला undergo।
मस्तिष्क र मेरुदण्ड - को कर्ड को तन्त्रिका ट्यूब देखि मेरुदण्ड विकास। आन्द्रा एक माध्यम संरचना प्राप्त। गिल पल्मोनरी श्वसन एक व्यक्ति चाल कारण, घाँटी overgrow slits।
स्तनधारी को वर्ग को एक विशिष्ट प्रतिनिधि मानव छ। यो taxon संयोगले छैन, तर विशेषता सुविधाहरू एक नम्बर द्वारा गर्न Systematics यो भन्छिन्। स्तनधारी सबै प्रतिनिधि, एक नर्स दूध आफ्नो जवान जस्तै। यो बहुमूल्य पोषक तत्व विशेष ग्रन्थीहरूको उत्पादन गरिएको छ।
होमो Sapiens Systematics placental स्तनधारी को एक समूह यसलाई भन्छिन्। भ्रूण विकास समयमा शरीर आमा र नजन्मेको बच्चाको जडान। intertwined रक्त नली को placenta, एक अस्थायी जडान तिनीहरूलाई बीच स्थापित छ। यो काम को परिणाम परिवहन र सुरक्षा कार्यहरु को कार्यान्वयन छ।
स्तनधारी अन्य प्रतिनिधिहरु संग मानव समानता अंग प्रणाली को संरचना र शारीरिक प्रक्रिया को प्रवाह को peculiarities मा पनि छ। यी enzymatic पाचन समावेश गर्नुहोस्। Biologically सक्रिय पदार्थ जिगर, salivary ग्रंथि, र अग्न्याशय द्वारा secreted छन्। incisors, canines, ठूलो र सानो आदिवासी: एक साधारण सुविधा भिन्नता दाँत उपस्थिति छ।
दुई चार कक्ष हृदय र परिसंचरण उपस्थिति न्यानो-blooded मानव गराउँछ। यो आफ्नो शरीर तापमान वातावरण यो प्यारामिटर निर्भर गर्दैन भन्ने हो।
होमो हेर्नुहोस् Sapiens बनी
सबै भन्दा साधारण परिकल्पना अनुसार, मानिसहरू र आधुनिक apes केही प्रकार एक साधारण पुर्खा छ। त्यहाँ प्रमाण को एक नम्बर हो। Hominid परिवार एउटा महत्त्वपूर्ण सुविधा विशेषता द्वारा छ - bipedalism। यो सुविधा, पाठ्यक्रम, को forelimbs को रिलीज र काम शरीर रूपमा हात को विकास गर्न नेतृत्व जो, जीवनशैली परिवर्तन संग सम्बन्धित छ।
पुरातन पुरातन र प्रारम्भिक आधुनिक मानिसहरूलाई: एक आधुनिक प्रकारको बन्ने प्रक्रिया धेरै चरणमा स्थान लियो। यी चरणहरु प्रत्येक अन्य प्रतिस्थापित छैन, र एक निश्चित अवधि coexisted र प्रत्येक अन्य संग competed।
सबैभन्दा पुरानो, वा पुच्चर नभएको बादर, आगो बनाउन पत्थर बाहिर उपकरण बनाउन स्वतन्त्र सक्षम, प्राथमिक चरण बस्थे। प्राचीन वा Neanderthals इशाराहरू र rudimentary स्पस्ट बोल्नु् बोली कुराकानी। आफ्नो उपकरण पनि हड्डी थिए। आधुनिक मानिसहरूलाई, वा CRO-Magnons, आफ्नै घरमा निर्माण वा गुफाहरुमा बस्थे। तिनीहरूले, पशु खाल देखि लुगा गरे बर्तन, domesticated जनावर, विकास बिरुवाहरु थाह थियो।
व्यक्ति जसको systematics शरीर रचनाको विज्ञान, शरीर विज्ञान र व्यवहार प्रतिक्रियाहरू, लामो विकासवादी प्रक्रियाको परिणाम को संयोजन गरेर निर्धारित।
Zhozef Lui Lagranzh - गणितज्ञ astronomer र इन्जिनियर
जानकारी को अवधारणा
भोल्टेज - विद्युत ईन्जिनियरिङ् को महत्त्वपूर्ण अवधारणा
भेनस: ग्रह को रंग। ग्रह शुक्र बारेमा जानकारी। मौसम भेनस
अग्निशामक को प्रकार
संरचना, वस्तु र विज्ञान रूपमा मनोविज्ञान को विषय
दबाइ "सेरेक्सोन" (मौखिक प्रशासनको लागि समाधान)। बच्चाहरु र वयस्कों को लागि उपयोग को लागि निर्देश
मल रोपेको संस्कृति रूपमा पैनकेक मुला
Melodrama को नाटक बारे फरक के छ? प्रमुख सुविधाहरू
मानव पाचन प्रणाली को शरीर
Feminist। के यो राम्रो वा खराब छ?
दाऊदले डी Kaptan Pritchard!: स्पेनिश मारो बारेमा सबैभन्दा रोचक कुरा
बेंच शीर्ष मिलिंग मिसिन: प्रकार, बीएफ 20 सीएनसी
क्लब हात्ती Simantro बीच5* (ग्रीस, Halkidiki): होटल, सेवा, को विवरण
मा साहित्य Expressive ग्राफिक कला
"हकदार गिरोह" चलचित्र। अभिनेता र भूमिकाको निर्देशक
तपाईं वजन लागि "Senade" लागूपदार्थको लाग्न सक्छ? वास्तविक मान्छे र सङ्केत गर्छ समीक्षा
ल्याप्टप लागि एक कार चार्जर को लाभ के हुन्?